Ukuzaliswa kweentlanzi ezivundisayo | Ngeentlanzi
La ukuveliswa kwakhona kwentlanzi Kwi-aquarium yinto engaziwayo ngabantu bonke, ngakumbi xa kuziwa ekunikezeleni iimeko eziyimfuneko zokuba i-fry izalwe ngaphandle kokuphazamiseka, kungoko ke kubalulekile ukuba nolwazi oluncinci, kule meko rukuveliswa kweentlanzi ezivuthayos, Oko kukuthi, owasetyhini ngowona ubeka amaqanda kwaye ziintlobo zamanzi amatsha.
Las amabhinqa oviparous Banokubeka amaqanda abo ngeendlela ezahlukeneyo, nje ukuba bakhuthazwe yindoda ukubeka amaqanda. Kuya kufuneka silumke ukuba azityiwa zezinye iintlobo okanye ngabazali ngokwabo, kufanelekile ukuba ukuzala kuqhutyelwe kwindawo eyahlukileyo yolondolozo lwabaselula, ngaloo ndlela kuthintelwe amaqanda ityiwa ide izale.
Ukuthintela ukuba zingatyiwa, kwi-aquarium kufuneka beka iimabhile ngasemva ke amaqanda aya kutyibilika phakathi kwemingxunya ngenye indlela kukubeka umnatha embindini we-aquarium. Ewe zikho nezinye iindlela zokuvelisa kwakhona kwaye kunjalo ngokusebenzisa amaqamzaNantsi eyindoda eyenza amaqamza emfazini afake amaqanda. Ezininzi zizezindlwane ezibekwe kwizityalo, olu hlobo lokuzala yenye yezinto Iintlanzi ze-beta.
Ngokwesiqhelo kwenzeka ukuba kukho iindidi ezicoce isiza ngaphambi kokubeka amaqanda, kwaye nokuba zakuba zibekiwe ziyazihambisa, ukuba zifumana indawo engcono. Ngokwesiqhelo indoda nenkazana iya kubakhusela Kwaye baya kuhlasela nayiphi na intlanzi esondela kubo, ngenxa yesi sizathu kulula ukudlulisela isibini kwi-aquarium yokuzala ehlala ihlala, kuzo zonke iimeko, ihlala iyeyona ilungileyo.
Elinye ityala elinomdla wokuzaliswa kweentlanzi kunye nokufukama kukuba ezinye iintlobo zenza njalo emlonyeni. Bayabizwa iincubators zomlomo njengoko bezigcina de iqanda liqandusele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukuzaliswa kweentlanzi ezivuthayo
Ukukhathalela i-guppy fry